HomeHoryaalada KaleWararka Xanta Suuqa Kala iibsiga:Giroud, Torres, Ferrari, Schuurs, Eriksen, Alaba
December 1, 2020 Horyaalada Kale, Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Inter Milan ayaa doonaysa inay lasoo wareegto weeraryahanka Chelsea iyo xulka France ee Olivier Giroud oo 34 jir ah, isla markaana ay lix bilood oo amaah ah iyo dookh iibsi ah kagala wareegto Chelsea. (tUTTOSPORT)
Laaakiin Inter Milan waxa saxeexa Giroud kula tartamaysa Juventus, iyadoo uu tababare Andrea Pirlo doonayo inuu afar ciyaartoy oo uu Giroud ku jiro uu lasoo saxeexdo. (Ilbianconero)
Chelsea waxay wada-hadallo la furtay Bayern Munich oo ay ka doonayso difaaca David Alaba oo 28 jir ah, kaas oo Lampard uudoonayo inuu bisha January helo. Laacibkan ayaa si xor ah uga bixi doona Munich xagaaga marka uu dhamaado heshiiskiisu. (AS)
Manchester United waxay rajaynaysaa in Villarreal ay ogolaan doonto inay dib u hesho difaaceedii hore ee Eric Bailly, isla markaana uu qayb ka noqdo £60 milyan oo Gini oo ay Red Devils kaga doonayso Pau Torres oo 23 jir ah. (Team Talk)
Liverpool waxay awoodi doontaa inay lasoo saxeexato difaaca Ajax ee Perr Schuurs laakiin waa haddii ay bixiyaan £27 milyan oo Gini. (De Telegraaf)
Leeds United ayaa rajaynaysa inay ku guuleysan doonto saxeexa weeraryahanka Liverpool ee Divoc Origi oo 25 jir ah, isla markaana ay ku garaaci doonto tiro kooxo ah dhamaadka xili ciyaareedkan. (Football Insider)
Tottenham waxay dusha kala socotaa difaaca kooxda Sassuolo ee Gian Marco Ferrari oo 28 jir ah, waxaana suurtogal ah inay u dhaqaaqaan bisha January. (90min)
Manchester United ayaa u dhaqaaqi karta khadka dhexe ee Inter Milan ee Christian Eriksen oo 28 jir ah, haddii kubbad-sameeyaha reer Denmark uu go’aansado inaanu ku laabanin kooxdiisii hore ee Tottenham. (Football Insider)
Houssem Aouard oo khadka dhexe uga ciyaara Lyon iyo xulka France ayaa sheegay in aanu ka shalaynayn burburkii ku yimid heshiiskii uu ugu wareegi lahaa Arsenal xagaagii. Waxa kale oo uu meesha ka saaray inuu tegi doono bisha January. (RMC Sport)
Barcelona, Real Madrid, Manchester City iyo AC Milan ayaa dhamaantood xiisaynaya difaaca reer Netherlands ee da’yarta ah ee Melayro Bogarde. 18 jirkan ayaa hadda u ciyaara kooxda reer Germany ee Hoffenheim. (Sport)
Barcelona waxay iska diidday dalab 250 milyan oo Euro ah oo u dhigmaysay £224 milyan oo Gini oo Inter Milan ay ksuoo dalbatay Lionel Messi sannadkii 2006, sida uu sheegay Madaxweynihii hore ee Barca ee Joan Laporta. (Footbll Italia)
Goolhayaha Fulham ee Alphonse Areola oo 27 jir ah ayaa sheegay inuu iska diiday tiro kooxo Real Madrid iyo Paris St-Germain ay ku jireen oo uu fursado uu ugu sii ciyaaro uu ka helay, sababtuna waxay ahayd inuu doonayay inuu tago horyaalka Premier League. (Canal+)
Javi Martinez oo ah 32 jir khadka dhexe uga ciyaara Bayern Munich ayaa muujiyey ishaaro tilmaamaysa inuu ka tegi doono kooxdaas marka uu dhamaado qandaraaskiisu bisha June, waxaanu ku nuux-nuuxsaday inuu doonayo inuu isku dayo wax cusub. (Reuters).